कति भयो कमलपोखरीको पुनर्निर्माण काम ? « Drishti News – Nepalese News Portal
कति भयो कमलपोखरीको पुनर्निर्माण काम ?
काठमाडौँ । कमलपोखरी पुनःनिर्माणको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । अहिले पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न गरी पोखरी वरपर सौन्दर्यको काम भइरहेको छ । आगामी एक महिनाभित्र सबै सक्नेगरी पुनःनिर्माणको काम भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी गराएको छ ।